हिमाल खबरपत्रिका | ट्रेकिङ ट्रेल मासेर मोटरबाटो !
ट्रेकिङ ट्रेललाई मिच्दै सडक बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित पदमार्गहरू मासिंदै गएका छन् भने पर्यटकहरू विकर्षित हुन थालेका छन्।
मनाङको घ्यारु–ङावल पदमार्ग अन्तर्गत नेस्याङ गाउँपालिकामा बनिरहेको सडक ।
अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने धेरैलाई किमकै जस्तो अनुभव हुने गरेको छ । पदमार्ग भएरै सडक बन्दा मनाङ पुग्ने पर्यटकहरू धुलाम्य सडकमा पदयात्रा गर्न बाध्य छन् । पर्यटकमाझ् चर्चित पदमार्ग मासिने गरी वा पदयात्राको मज्जा नै खलबलिने गरी जथाभावी सडक किन बनाइयो त ? सरकारी अधिकारीहरूले ‘स्थानीय जनताको माग अनुसार’ भनिरहँदा विश्वमै चर्चित पदमार्गहरू धरासायी बनिरहेका छन् ।
सडक विभागले मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र जुम्ला खण्डमा सडक विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा उच्च पहाडी क्षेत्रमा सडक बनाउन मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्तै सडकको नामै तोकेर बजेट विनियोजन गर्न त्यस क्षेत्रका सांसदहरूले दबाब दिएका थिए । विभागका अधिकारीहरू हिमाली क्षेत्रमा सडक बनाउने विषय राजनीतिक होड बनेको र यस क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले पदमार्ग बचाउनेतिर ध्यान नदिएको बताउँछन् ।
विभागले गरिरहेको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार नै सडक निर्माण भए विश्वकै उँचो स्थानमा रहेको पदमार्ग थोरङ–ला हुँदै सडक बन्नेछ । मनाङबाट ५ हजार ४१६ मिटर उँचाइमा रहेको थोरङ–ला हुँदै मुक्तिनाथ निस्कने पदमार्ग आन्तरिक पर्यटकसँगै विदेशीमाझ् निकै चर्चित छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी थोरङ पासमा सडक निर्माण गरिए त्यस क्षेत्रको पर्यटनमा निकै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिन्छन् । उनी भन्छन्, “बस्ती भएका ठाउँमा सडक नबनाउनू भन्न मिल्दैन । तर, मनाङ र मुस्ताङ जोड्न थोरङ पास भएर सडक बनाउनु ठीक होइन ।”
नेपाल गाइड एशोसिएसनका अध्यक्ष कर्ण घलेको वैकल्पिक पदमार्ग बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप छ । “वैकल्पिक पदमार्ग बनाउन हामीले सरकारलाई रुटसहित सुझव दिएका थियौं, मन्त्रालयमा छलफल हुने तर काम नहुने रोग छ” घले भन्छन्, “सरकार अझै पनि जागेन भने हाम्रो पदयात्रा पर्यटन खत्तम हुनेछ ।”